IMVELISO EKUTHIWA YIPARADOX: YINTONI LE KWAYE SINGAYIHAMBA NJANI NGAPHAYA KWAYO? - IMVELISO
Imveliso ekuthiwa yiParadox: Yintoni le kwaye singayihamba njani ngaphaya kwayo?
Yintetho edandathekisayo esakha sayiva amaxesha ngamaxesha: Ukwanda kwetekhnoloji akuthethi kuthi kuguqulela kunyuso lwemveliso.
Beka enye indlela nguRobert Solow, ophumelele uNobel kwezoqoqosho,
Ungayibona iminyaka yekhompyuter kuyo yonke indawo kodwa kumanani manani emveliso.
Ngamanye amagama, ngenxa yokuba iikhompyuter zethu zikhawuleza, oko akuthethi ukuba siyakuba nokutsiba ngokulinganayo kwimveliso. Ngapha koko, okuchaseneyo kunokuba yinyani!
Umbhali weNew York Times uMatt Richel ubhale kwinqaku lephepha elalibuyelela ngo-2008 elalisithi, Ubungqina beenkcukacha kunye nobungqina bokuthi i-teknoloji efanayo ekhokelela ekuphuculweni kwemveliso inokuba yinto enobungozi xa isetyenziswa kakhulu.
Kukho ukuphazamiseka okungaqhelekanga xa kuziwa kwimveliso. Endaweni yokubonisa ijika, Imveliso yethu ekugqibeleni iya kufikelela kwithafa, nkqu nenkqubela phambili kwitekhnoloji .Intengiso
Ke oko kuthetha ntoni kumanqanaba ethu obuqu emveliso? Kwaye oku kuthetha ntoni kuqoqosho lwethu luphela? Nantsi into ekufuneka uyazi malunga nemveliso yokuphazamiseka, oonobangela bayo, kunye nokuba zeziphi izisombululo ezinokubakho ukulwa nayo.
indlela yokuthengisa ngakumbi kwi-etsy
Yintoni indida yemveliso?
Singawulinganisa njani umsebenzi nokuba kunjalo?
Unobangela onokubakho wokuphazamiseka kwemveliso
Indida kunye nokudodobala koqoqosho
Kukho ukungangqinelani phakathi kotyalo-mali ekukhuleni kweIT kunye nenqanaba lesizwe lemveliso kunye nemveliso. Ixesha lokuphazamiseka kwemveliso laba yinto edumileyo emva kokuba lisetyenziswe kwisihloko sephepha lika-1993 ngu-Erik Brynjolfsson we-MIT, uNjingalwazi wezoLawulo kwiSikolo soLawulo lweMIT Sloan, kunye noMlawuli weZiko leMIT loShishino lweDijithali.
Kwiphepha lakhe, uBrynjolfsson wathi nangona kubonakala ngathi akukho kulungelelaniswa ngokuthe ngqo, okunokulinganiswa phakathi kokuphuculwa kwe-IT kunye nokuphuculwa kwemveliso, oku kunokuba sisibonakaliso sendlela imveliso elinganiswa ngayo kwaye ilandelwe.
Wabhala kwisiphelo sakhe:
Izinto ezingaphathekiyo ezinjengokuphendula okungcono kubathengi kunye nokwanda kokunxibelelana nabathengisi akusoloko kunyusa isixa okanye umgangatho wangaphakathi wemveliso, kodwa bayanceda ukuqinisekisa ukuba ifika ngexesha elifanelekileyo, kwindawo elungileyo, kunye neempawu ezifanelekileyo kumthengi ngamnye .
Njengokuba abaphathi bejonga ngaphaya kwemveliso kwezinye zezibonelelo ze-IT, ngokunjalo kufuneka abaphandi bakulungele ukujonga ngaphaya kweendlela eziqhelekileyo zokulinganisa imveliso.
Kwaye oku kuzisa inqaku elilungileyo. Ilinganiswa njani ngqo imveliso?
Kwimeko ye-US Bureau of Labor Statistics, ukufunyanwa kwemveliso kulinganiswa njengepesenti yotshintsho kwimveliso yasekhaya iyure ngeyure yomsebenzi.
Kodwa ezinye iimpapasho ezinje ngeUS Today, bathi le asiyondlela ilungileyo yokulandelela imveliso, endaweni yoko usebenzise into ebizwa ngokuba yiTotal Factor Productivity (TFP). Ngokuka-US Today, i-TFP ivavanya ingeniso ngomqeshwa ngamnye emva kokuthabatha ukuphuculwa kwemveliso okubangelwe kukwanda kwempahla yexabiso, phantsi kwengcinga yokuba utyalomali kwizityalo zale mihla, izixhobo kunye netekhnoloji ngokuzenzekelayo iphucula imveliso.
Ngamanye amagama, le ndlela inobunzima bokutshintsha kwemveliso ngo lungakanani uphuculo olukhoyo okokoko kwaqokelelwa izibalo zemveliso .
Ndiyoyika ukuya emsebenzini
Kodwa ukuba asikwazi nokuvumelana ngeyona ndlela ilungileyo yokulandelela imveliso, emva koko singazi njani ngokuqinisekileyo ukuba ngaba singenile kwindida yemveliso?
UBrynjolfsson uphakamisa ukuba zine izizathu ezinokubangela ukuphazamiseka:Intengiso
Imilinganiselo engeyiyo - Izibonelelo ziyinyani kodwa imilinganiselo yethu yangoku iyaphoswa.
Ukuhanjiswa kwakhona - Kukho iinzuzo zangasese, kodwa ziza ngendleko zezinye iifemu kunye nabantu, zishiya inzuzo encinci.
Ixesha elishiyekileyo - Ukufumana kuthatha ixesha elide ukubonisa.
Ukuphathwa gwenxa - Akukho zibonelelo ngenxa yeengxaki ezingaqhelekanga zokulawula i-IT okanye ulwazi ngokwalo.
Kubonakala ngathi kukho ubungqina bokuxhasa ithiyori yokulinganisa gwenxa njengoko kubonisiwe apha ngasentla. Omnye umgqatswa othembisayo kukuhamba kwexesha, okuxhaswa ngumsebenzi kaPaul David, isazi ngezoqoqosho kwiYunivesithi yaseOxford.
Ngokwenqaku elikwi Uqoqosho, uphando lwakhe lubonakalisile ukuba ukukhula kwemveliso akuzange kukhawulezise kude kube yiminyaka engama-40 emva kokuqaliswa kwamandla ombane kwii-1880s zokuqala.Oku kungenxa yokuba kwathatha ukuya kuthi ga ngo-1920 ubuncinci kwisiqingatha soomatshini baseMelika bokwenza umbane.
Ke ngoko, uphikisa ukuba, asizukubona ukutsiba okukhulu kwimveliso de i-US kunye namagunya amakhulu ehlabathi afikelele ubuncinci kwi-50% yokungena kwinqanaba lokusetyenziswa kwekhompyuter. I-US ibethe kuphela olo phawu kwiminyaka elishumi eyadlulayo, kwaye amanye amazwe amaninzi asemva kakhulu kwelo nqanaba lokukhula.
Indida yemveliso inesinye isiphumo kuqoqosho lwezoqoqosho. NgokukaNeil Irwin,
Imveliso ephezulu ebhekise esibhakabhakeni iye yathetha ukuba imveliso ishishina ngokunciphileyo, isenza ukuba kungabikho mfuneko yokuqesha abasebenzi abarhoxisiweyo… amashishini avelisa kuphela iipesenti ezi-3 ezimbalwa zeempahla kunye neenkonzo kunokuba zazinjalo ekupheleni kuka-2007, kanti amaMelika asebenza phantse i-10. Ipesenti yeeyure ezimbalwa ngenxa yomxube wokudendwa kunye nokushiyeka kwiveki yokusebenza.
Oku kuthetha ukuba ngakumbi nangakumbi iinkampani zizama ukwenza kancinci nangakumbi , kwaye oko kuthetha ukucudisa umsebenzi wabantu ababini okanye abathathu kumqeshwa omnye kwezinye iimeko.Intengiso
Ngokwengxelo ka-Irwin, abasebenzi, boyikiswa kukhuseleko lwabo lomsebenzi, banciphisa imveliso ngaphezulu kweyure nganye [ngo-2010].
Inqaku lakutshanje kwiSilayiti libeka yonke into ngokokujonga okukodwa:
Mhlawumbi i-Intanethi ayisiyonguqulelo njengoko sicinga ukuba injalo. Ngokuqinisekileyo, abantu banokufumana ulonwabo olungapheliyo kuyo-ukutyekela kwayo ekuphuculeni umgangatho wobomi babantu akunakuphikwa. Ngokuqinisekileyo, isenokuyiguqula indlela esizifumana ngayo, esizithengayo, kunye nokuthengisa iimpahla kunye neenkonzo. Kodwa oko akuthethi ukuba kungokutshintsha koqoqosho njengoko, yithi, oololiwe babenjalo.
Okwangoku, uBrynjolfsson uthi ukungalungelelanisi imveliso kunokuba ziziphumo ezibi zabantu abafunda indida, mhlawumbi ngaphezulu kwayo nayiphi na enye into.
Kuba mna nawe siyekile ukuthenga iiCD, imboni yomculo inciphile, ngokwengeniso nakwiGDP. Kodwa asimameli umculo omncinci. Kukho umculo omninzi osetyenzisiweyo kunangaphambili.
Kwiphepha, indlela ebalwa ngayo i-GDP, imboni yomculo iyanyamalala, kodwa enyanisweni ayipheli. Iyanyamalala kwingeniso. Ayipheli ngokwento ekufuneka uyikhathalele, ingumculo.
izinto ezindenza ndincume
Mhlawumbi indida ayisosigwebo sentambo kwimveliso yethu emva kwayo yonke loo nto. Lixesha kuphela (kwaye mhlawumbi neendlela zokuphucula ubungakanani) eziya kuthi zixelele.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: UCathryn Lavery nge unsplash.com
 ^ UErik Brynjolfsson: Imveliso yokuphikisana netekhnoloji yoLwazi: uPhononongo kunye noVavanyo
 ^ USA Namhlanje: Imveliso isenokuvakala njengenye yeenkcukacha-manani ezothusayo ingqondo.
 ^ Uqoqosho: Ukusombulula indida
 ^ UNeil Irwin: Imveliso yeParadox
abantwana banamhlanje soze bazi
ukuba ngumbhali onempumelelo
indawo encinci yokuhlala eCalifornia
Ungasifumana njani isikhangeli sangasese
upeyinta njani iinwele zakho
thumela ividiyo kwikhompyuter kwi-iphone
Ekhaya Ubomi Obunokubakho Ukhuselo Lokusingqongileyo 2 Ipodcast Impilo Yomntwana